I-Australia ishenxisa iipremiyamu ezihlaziyiweyo ukunciphisa umrhumo wombane | Ukuhlaziywa okuluhlaza
Urhulumente wase-Australia ubhengeze ukuba iipremiyamu zecandelo lezamandla ahlaziyekayo izakucinywa, njengenxalenye yesicwangciso samandla esijolise ekunciphiseni iirhafu kunye nokuqinisekisa «uqoqosho» unikezelo lweenkampani nabantu.
Endaweni yoncedo lwangoku, izakuqala isicwangciso esibizwa ngokuba "sisiqinisekiso samandla esizwe" ukukhuthaza abasasazi beli candelo Thenga amandla esiseko somthwalo, ukongeza ekusebenziseni isixa esikhulu samandla angangcolisiyo unyaka nonyaka.
Umlinganiso, osekwe kwizindululo zeBhodi yoKhuseleko lwaMandla, uza kubonelela "ngombane ofikelelekayo nonokuthenjwa, ngelixa usivumela ukuthobela izibophelelo zethu zamanye amazwe«, Waqinisekisa uMphathiswa wezaMandla, uJohn Frydenberg kunye ne-Nkulumbuso, uMalcolm Turnbull.
Ngokwenkcaso, sisabelo «icace gca»Phambi kwamacandelo alawulayo omdibaniselwano olawulayo, izakususa iipremiyamu zamandla ahlaziyekayo ukusukela nge2020, ithathela ingqalelo ukuba eli candelo liza kukwazi ukukhuphisana kwimarike yasimahla.
Ngokwaseburhulumenteni: «Ngumgaqo-nkqubo onokuthenjwa, intengiso ephambili ekhokelela kumaxabiso ombane ngexabiso eliphantsi. Oko kuthetha ukuba akuyi kubakho zibonelelo, akukho rhafu okanye iinkqubo zotshintshiselwano.
Isigqibo sibandakanya ukwamkelwa kwezindululo ezinikwe kwiinyanga ezine ezidlulileyo sisazinzulu esiyintloko kuRhulumente wase-Australia, u-Alan Finkel, sokuba kwenziwe utshintsho icocekile kusetyenziso lwamandla ahlaziyekayo ukuze ngo-2030 babonelele ngaphezulu kweepesenti ezingama-42 zokusebenzisa amandla.
Ngokwengxelo ezenziwa ngabahlalutyi kumajelo kamabonwakude ahlukeneyo, Isicwangciso sikarhulumente ithatha ukuba izinto ezinokuhlaziywa ziya kumela ngaphantsi kweepesenti ezingama-40 zaloo nyaka.
Urhulumente womdibaniselwano olondolozayo, oquka abameli beshishini lamalahle kunye nabagxeki malunga notshintsho lwemozulu, uyaqinisekisa ukuba amakhaya iya konga minyaka le ukuya kuthi ga kwi-AU $ 115 (iUS $ 90,22 okanye i- € 76,50) phakathi ko-2020 no-2030.
NjengaseSpain, ixabiso lombane lenyuke ngaphezulu kweepesenti ezingama-60 kule minyaka ilishumi idlulileyo e-Australia
Inkokheli yeLabour Party, u-Bill Shorten, utyhola u-Turnbull ngokunikezela kwiimfuno ze-Nkulumbuso u-Tony Abbott, ozibeka njengo ukuthandabuza ebusweni bokutshintsha kwemozulu.
Isithethi sezabasebenzi kumandla ahlaziyekayo, uMark Butler uqinisekisa ukuba icebo likaRhulumente “uya kutshabalalisa Amandla ahlaziyekayo kunye namawaka emisebenzi kolu shishino. Uye wongeza ukuba iqela lakhe lifuna amandla acocekileyo ukumela iipesenti ezingama-50 zokusebenzisa amandla ngo-2030.
Kwelakhe icala, inani lokuqala leGreen Party, uRichard di Natale, uthathele ingqalelo ukuba isibhengezo siza kuthintela i-Australia ekuhlangabezeni iinjongo iphakanyisiwe kwiSivumelwano saseParis.
Nangona kunjalo, i-Australia yabhengeza kwiminyaka emibini edlulileyo ukuba injongo yayo yayikukunciphisa ukukhutshwa kwegesi engcolileyo nge-2030 phakathi kwe Iipesenti ezingama-26 nama-28 ngaphantsi kwamanqanaba ka-2005.
Ngelishwa, namhlanje, ngaphezulu kweepesenti ezingama-85 zamandla asetyenzisiweyo e-Australia avela ifosili yeefuweli, ikakhulu ukusuka kumalahle. Uninzi lwenzululwazi lukholelwa ekubeni kufuneka lucuthwe ukunceda ukunciphisa iziphumo zotshintsho lwemozulu.
Ngethamsanqa, ukuphucuka okubonakalayo ekusebenzeni kwezinto ezinokuhlaziywa kuya kunceda abatyali mali babucala ukuba batyale imali kuzo, owona mzekelo ubalaseleyo sisityalo sePort Augusta sombane welanga.
1 Esona sityalo sikhulu sombane welanga emhlabeni siya kwakhiwa e-Australia
1.1 Isityalo eshushu
Urhulumente wase-Australia uvumile ukuba kwakhiwe esona sityalo sikhulu sombane welanga kwihlabathi. Oku kuya kuba namandla e-megawatts ezili-150 kwaye iza kwakhiwa ePort Augusta, eMzantsi Australia.
Isityalo siya kubiza I-650 yezigidi zeedola zase-Australia (i-510 yezigidi zeedola zaseMelika), Iya kuvelisa malunga ne-650 yemisebenzi yokwakha yabasebenzi basekuhlaleni, ngokutsho kwabaphuhlisi, kwaye ijolise ekugubungeleni zonke iimfuno zombane kurhulumente welizwe. Umsebenzi uza kuqala kunyaka olandelayo kwaye ucwangciselwe ukugqitywa ngo-2020.
ISolarReserve, eseCalifornia, yinkampani ephetheyo kolwakhiwo. Inkampani yaseMelika ikwangasemva kwesityalo se-Crescent Dunes CSP se-110-megawatt eNevada.
Izityalo zelanga zitshintsha ukukhanya kwelanga ngqo kumbane, ngenxa yoko zifuna iibhetri ukugcina amandla agqithisileyo xa iLanga lingakhanyi; izityalo ze-thermal zelanga, kwinxalenye yazo, zisebenzise Iipili ukugxila elangeni kwinkqubo yokufudumeza.
Ngokutsho kweengcali ezahlukeneyo, njengoprofesa we IYunivesithi yesizwe yaseOstreliya, UMatthew Stocks: "Omnye wemiceli mngeni emikhulu yamandla ashushu njengesixhobo sokugcina kukuba unokugcina ubushushu kuphela".
"I-Thermal yindlela engabizi kakhulu yokugcina amandla kunokusebenzisa iibhetri"Wongeza uprofesa wobunjineli bamandla azinzileyo uWasim Saman, ovela kwiYunivesithi yoMzantsi Australia.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuhlaziywa okuluhlaza » Umoya ovuselelekayo » I-Australia ishenxisa iipremiyamu ezihlaziywa ngokutsha ukunciphisa ityala lombane
Izinto zokubasa ze-Arctic azizukukhutshwa
Umsi, yintoni, iziphumo zayo nendlela yokulwa nayo